Kaominin’i Bongatsara Tapa-bolana tsy nisy rano…
Nanomboka tamin’ny taona 2010 no ho nankaty no efa nampikolay ireo mponin’i Bongatsara, distrikan’Atsimondrano, ny fahazoan-drano ao amin’ity kaominina ambanivohitra ity,
raha ny nambaran’ny mponina ao an-toerana. Mandeha in-droa isaky ny herinandro, amin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 5 ora maraina izany, teo aloha. Nihena in-dray mandeha avy eo ary zary isam-bolana no niafarany. Ity volana oktobra ity moa dia tsy mbola nisy nitete, raha ny voambara hatrany. Any amin’ny 500 metatra miala amin’ny tanàna vao misy lavadrano anefa ary tsy maintsy izay no vahaolana manoloana izao fijaliana ara-drano izao, raha ny voalaza. Isan’ny mitaraina indrindra ihany koa manoloana izay olan-drano izay moa ny eny Anosizato eny satria dia rano maloto tanteraka no atolotry ny Jirama kanefa ny faktiora mitomboka hatrany, hoy ny fitarainan’ireo mponina.